Zona Rosa Entertainment Degmada Kansas City
Mareykanka Missouri Kansas City
Zona Rosa waa dukaanka cusub ee Kansas City, dukaanka iyo madadaalada ee ku yaala magaalada Kansas, waqooyiga. Waxay ku faantaa in ka badan 20 maqaayado iyo 30+ dukaamo - dukaamo kasta oo jannada ah oo dhan meel hal meel ah !!
Zona Rosa waxay ku taallaa Waqooyiga Galbeedka Waqooyi Galbeed ee I-29 iyo Barry Rd., Keli ah Koonfurta Kansaska Caalamiga ah ee Caalamiga ah ee Kansas iyo 15 ka mid ah Waqooyiga Magaalada Downtown.
Halkan riix jihooyinka iyo khariidada.
Dukumiintiyadu waxay furan yihiin Isniinta ilaa Khamiista 10:00 AM - 9:00 PM, Jimco iyo Sabtida 10:00 AM - 10:00 PM, iyo Axada Noon - 6:00 PM.
Waxaa jira laba gawaarida waaweyn ee baarkinka iyo gawaarida bariga iyo koonfurta. Labaduba waa bilaash. Zona Rosa ayaa sidoo kale bixisa gawaarida gawaarida gawaarida la dhigo oo dhan oo ku yaal bartamaha agagaarka dukaamada tafaariiqda. Dhammaan lacagaha saafiga ah ee ka yimaada mitirka baarkinka ayaa loogu deeqay ururada samafalka ee maxaliga ah iyada oo loo marayo barnaamijka Beddelista Charity .
Zona Rosa waxay leedahay maqaayado waaweyn oo badan oo bixiya cunnada ay u leeyihiin dhadhan iyo miisaaniyad kasta. Bravo waxay leedahay cunto weyn, jawi qabooban iyo hudheello weyn. Sidoo kale isku day Abello's, Smokehouse ama Guriga Herdford (halyeeyga KC!). Swagat waxay haysaa cuntada ugu fiican Indian (oo leh qado weyn oo qado ah) oo ku dhuftey Boatings haddii aad ku jirto xaalad shiineys ah oo Shiineys ah. Waxaa sidoo kale jira Ted's Montana Grill, iyo Mimi ee cuntada raaxada iyo sidoo kale dad badan oo kale.
Zona Rosa waxay leedahay dukaanno iibsanaya dukaamo badan - kuwaas oo badan oo loo diyaargaroobey dhalinyarada, dhalinyarada iyo da'yarta 20-jir. Raadi dukaamo sida Forever 21, Abercrombie & Fitch, Hollister, Mawduuca kulul, AE, iyo Gap. Laakiin ha u ogolaanin in dhalinyaradu ay kugula socodsiiyaan, waxaa jira waxyaabo ay ka mid yihiin dukaamada tafaariiqda sida Ann Taylor Loft, Cache, DSW, iyo Barnes iyo Noble.
Halkan waa liis dhamaystiran ee dukaamada Zona Rosa.
Zona Rosa waa meel aad u fiican carruurta. Waxay leeyihiin laba hudheel oo waaweyn oo lagu qalabeeyo ilo-fiilo ay carruurtu ku socdaan oo ay ku daboolaan qolofta. Meelaha Magaaladu wuxuu ku yaallaa isbaaro iyada oo loo maro isha oo ku fiican maalmaha xagaaga kulul. Waxay sidoo kale dhigeen meel lagu ciyaaro "miro" caag ah oo ku yaal meerkuri ka hooseeya Marshall. Shopping-wise, Dhismaha-a-Bear, Meesha Carruurta, Racfaanka, Xaddidan II iyo Dukaanka cusub ee Disney waa fowdo kasta ee hooyada.
Inkasta oo makhaayadaha labadaba ay cunaan cunto weyn, O'dowd's Little Dublin iyo Tomfooleries labaduba waxay bixiyaan cuntada dibadda iyo goob weyn oo weyn marka qorraxdu hoos u dhacdo. Filo muusikada noolasha iyo saacadaha aadka u faraxsan 7 cirifka todobaad kasta.
Zona Rosa ayaa sidoo kale ku daray liiska Majaajilada Majaladda liiska kireystayaasha waaweyn. Majestic waxay ka kooban tahay saddex goobo tiyaatarka iyo adduunka caanka ah ee Horumarinta Comedy Club ee labadaba waxay bixiyaan adeegyo cunto iyo cabitaan oo aad ka amin karto kursigaaga! Akhri aragtidayda akhbaar dheeraad ah.
Xagee Laga Heli Karaa Diyaargarowgaaga, Kusoo Jeeda Magaalada Kansas
Xagee loo tagaa barafka laga galo aagga magaalada Kansas
Bedka iyo Fasaxyada Kansas City
Xarunta Dhexe: Dhuxusha Kansas City
9 Hudheelka Best Kansas City ee 2018
Waxyaabaha ugu Sarreeya ee la sameeyo Martida Magaalada ka baxsan inta lagu jiro fasaxyada KC
Barta Irishka iyo Iskuduwaha ee LA
Hagaha Hagista Rwanda: Xaqiiqooyinka Muhiimka ah iyo Macluumaadka
2017 Suuqa Suuqa ee Washington, Aagga DC
Waa kuwan sida loo kulmo Abriil Giraffe
Hawlgalka San Luis Rey
Sida Loogu Heli Karo Guriga Cuntada ee Phoenix
Damaashaadka Farshaxanka Fine ee Scottsdale, Arizona
Goobaha ugu fiican ee Qoyska u ah ee Maui
Beeraha ugu fiican ee SF
Saipan - Northern Marianas Islands Pacific
Xerooyinka Dayrka ee Galbeedka Soomaliya
Nashville Hagaha Hawl-galinta Sanadlaha ee November